ကြော်ငြာ ချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
February 2009 edited February 2009 in Networking
နည်းပညာပိုင်းနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး ဗျ။ ...ကျွန်တော် မှာ ကြော်ငြာစရာလေး ရှိလို့ မို့ ကြော်ငြာခွင့် ပြုပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်။ တခြား မဟုတ်ပါဘူး ...ကျွန်တော်တို့ ဆရာကြီးတွေ ရဲ့ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမယ့် အကြောင်းလေး ကိုအင်တာနက်ကနေ တင်ပေးပါဆိုလို့ ဒီကနေတဆင့် တင်ပေးချင်လို့ပါ။ကျင်းပမည့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။
ယခင်မိတ္ထီလာဒေသကောလိပ်တွင် ( ၁၉၇၇-၁၉၈၁ )ခု နှစ်များ အတွင်း
(၂) နှစ်တာသာ ဆုံတွေ့ခင်မင်ကြရပေမယ့် အနှစ်(၂၀)ကျော်တိုင် မမေ့နိုင်ဖြစ်ရဆဲвЂ¦. ဖြစ်ကြဆဲвЂ¦.သူငယ်ချင်း အပေါင်းတို့вЂ¦вЂ¦вЂ¦
(၁၉၇၇)ခုနှစ်မှ (၁၉၈၁)ခုနှစ်အတွင်း ယခင်မိတ္ထီလာဒေသကောလိပ်တွင် တာ၀န်ထမ်း ဆောင်သွားခဲ့ကြတဲ့ ဆရာကြီး ၊ ဆရာမကြီးများကို ပူဇော်ကန်တော့ကြရင်း မိတ်ဆုံစားပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၀၉ခုနှစ် ၊ မေလ (၂)ရက်မှာ မိတ္ထီလမြို့ ၊ မြို့တွင်းဆုတောင်းပြည့် သာသနာ့ ဗိမာန်တော်ကြီးတွင် စည်ကားသိက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပါမယ်။ ကိုတို့ရဲ့ ခင်မင်မှုတွေ ကို သား၊သမီးများအထိ လက်ဆင့်ကမ်းရစ်ကြဖို့ မပျက်မကွက် ဆုံတွေ့ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းပါတယ်вЂ¦.အပူဇော်ခံ ဆရာကြီး/ဆရာမကြီးများမှာ (၈၆)ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဟောင်းများထံ အလှူငွေများ ထည့်၀င်ကြပါရန် လည်း နှိုးဆော်အပ်ပါကြောင်းвЂ¦.
၁။ ဒေါက်တာရဲအောင် (မိတ္ထီလာ) ဖုန်း ၀၆၄-၂၅၆၅၃
၂။ ဒေါက်တာနေမျိုး (မန္တလေး) ဖုန်း ၀၂-၃၉၅၀၄ ၊ ၀၉-၅၁၄၁၇၄၅
၃။ ဦးတင်ရွှေ (မန္တလေး) ဖုန်း ၀၉-၂၀၀၂၇၀၄
၄။ မန္တလာဦးစိုးမြင့် ဖုန်း ၀၉-၂၀၀၄၇၇၇ ၊ ၀၁-၆၅၅၂၄၂
၅။ ဒေါ်နီနီလွင် (မန္တလေး) ဖုန်း ၀၉-၂၁၃၀၁၈၆ ၊ ၀၂-၇၃၁၄၃
၆။ ဗိုလ်မှူးမောင်မောင် (ငြိမ်း) (ရန်ကုန်) ဖုန်း ၀၁-၆၄၃၉၄၃ ၊ ၀၉-၅၁၆၃၇၈၄
၇။ ဒေါ်မို့မို့အောင်(ရန်ကုန်) ဖုန်း ၀၁-၅၄၈၂၉၀ ၊ ၀၉-၅၀၃၀၈၈၁
၈။ ဒေါ်ခင်မြတ်နွယ် (ရန်ကုန်) ဖုန်း ၀၁-၅၄၈၀၄၈ ၊ ၀၉-၅၂၀၁၀၇၉
၉။ ဦးစိုးအောင်(ရန်ကုန်) ဖုန်း ၀၁-၅၇၁၇၈၁ ၀၉-၈၀၂၀၄၁၈
၁၀။ ဦးခင်မောင်ဆွေ(မိတ္ထီလာ) ဖုန်း ၀၆၄-၂၃၃၈၅ ၊ ၀၉-၂၂၀၁၃၉၄
၁၁။ ဦးစောနိုင်ထွန်း (မိတ္ထီလာ) ဖုန်း ၀၆၄-၂၄၂၆၆ ၊ ၂၃၆၄၄
၁၂။ ဦးမြင့်မောင်အေး (လ/ထ ညွှန်မှူး ဆည်မြောင်းစက်မှု ၊ မိတ္ထီလာ)
ဖုန်း ၀၆၄-၂၃၀၇၆ ၊ ၀၉-၂၂၀၁၄၂၂
၁၃။ ဦးကိုကိုနိုင်+ဒေါ်မြတ်မြတ် (မိတ္ထီလာ) ဖုန်း၀၆၄-၂၄၆၀၅၁ ၊ ၀၉-၂၂၀၁၁၇၃
၁၄။ ဒေါ်ဂျွိုင်းအေးမာမြင့် ဖုန်း ၀၆၄-၂၃၈၀၀ ၊ ၀၆၄-၂၆၁၂၈
၁၅။ ဒေါက်တာဇော်လင်း (မိတ္ထီလာ) ဖုန်း ၀၆၄-၂၃၈၁၀ ၊ ၂၅၉၀၃
၁၆။ ဦး၀င်းတင် (မိတ္ထီလာ တက္ကသိုလ်) ဖုန်း ၀၆၄-၂၅၁၂၃ ၊ ၀၉-၂၀၁၅၁၆၄
၁၇။ ဦးလှမြင့် (မိတ္ထီလာ) ဖုန်း ၀၆၄-၂၄၀၇၈ ၊ ၀၉-၅၁၆၈၈၃၃
အပူဇော်ခံဆရာကြီး/ဆရာမကြီးတွေနဲ့။ ကနဦးအလှူရှင်တွေက ဘယ်သူတွေ ဆိုတာ သိရအောင်.. အပြည့်အစုံဖတ်ရအောင် ဒီကို လာခဲ့ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.....